Ungamamela njani iiBeats 1 kwizixhobo ezine-iOS 6, iOS 7 kunye ne-Android | IPhone iindaba
Ungayimamela njani i-Beats 1 kwi-iOS 6, i-iOS 7 kunye nezixhobo ze-Android
UIgnacio Sala | | Android, iOS 6, iOS 7
IOS 8.4 isizisele iApple Music njengeyona nto intsha, Inkonzo yomculo yokusasaza i-Apple edityaniswe kwisicelo soMculo. Kodwa ukongeza kwinkonzo yomculo eshukumayo, ikwasinika nenkonzo kanomathotholo apho abasebenzisi bengenakho ukunxibelelana okunokwenzeka, ngaphandle kokuba masinxibelelane nabo ukuze badlale ingoma esiyifunayo.
Ngelo xesha I-Apple Music ifumaneka kuphela kwizixhobo ze-iOS ezinenguqulo entsha ye-8.4 efakiweyo. Kodwa kwiinyanga nje ezimbalwa, ngo-Okthobha olandelayo, iApple izakwazisa ngokwayo isicelo se-Android, mhlawumbi nakwifowuni yeWindows, ukuzama ukufikelela kwinani elikhulu labasebenzisi (ukuba imisebenzi iyiphakamisile intloko) nangona le niche yentengiso ingayi kuba nayo yasimahla Ityala leenyanga ezintathu.
Enkosi kumsebenzisi uBenji R, ophumeleleyo Fumana i-URL efihliweyo esetyenziswe ngu-Apple ukusasaza i-Beats 1 radioAbasebenzisi bamanye amaqonga, anjenge-Android, kunye nabasebenzisi abanezixhobo ezifakwe i-iOS 6 okanye i-iOS 7, banokumamela esi sikhululo sikanomathotholo ngaphandle kokufaka nasiphi na isicelo kwizixhobo zabo. Le URL isivumela ukuba simamele umculo nakwi-PC yethu okanye kwi-Mac ngaphandle kokufaka inguqulelo yamva nje ye-iTunes.
Ukuze sikwazi ukumamela iBeats 1 Radio kufuneka nje sityelele eli khonkco lilandelayo irumble.com/beats1/ kwaye ucofe iqhosha lokudlala. Ndivavanye le nkonzo nge-iPhone 4, ene-iOS 7 (uguqulelo lokugqibela olufunyenwe sesi sixhobo) kunye Ukudlala kwakhona kuhlala ngasemva ngaphandle kokucima isikrini kunye nokuvula ezinye ii -apps. Umsebenzi kunye nomgangatho wesandi zamkelekile. Enye into luhlobo lomculo abalukhuphayo, kuba akukho nto ibhaliweyo malunga nezinto abazithandayo. Le URL inokuthi ivalwe yiApple ukuthintela abanye abasebenzisi ekusebenziseni inkonzo, ke inokuyeka ukusebenza ngalo naliphi na ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Ukhuphiswano » Android » Ungayimamela njani i-Beats 1 kwi-iOS 6, i-iOS 7 kunye nezixhobo ze-Android
ayisasebenzi, iwebhusayithi yona iyakuxelela ukuba iapile sele iyithintile.
UIgnacio Lopez sitsho
Isebenza ngokugqibeleleyo, kodwa ayizukuthatha ixesha elide ukucima impompo.
Phendula u-Ignacio Lopez
Uluhlu lweetweaks ezihambelana ne-iOS 8.4
Ngaba awuzange uzame ukubukela ividiyo kwii-60 fps kwi-YouTube app okwangoku?